विराटनगर विमानस्थलमा हातले छामेर सुरक्षा जाँच! :: रविन्द्र शाही :: Setopati
विराटनगर विमानस्थलमा हातले छामेर सुरक्षा जाँच!
विराटनगर विमानस्थलमा डेढ महिनादेखि एक्सरे मेसिनले काम गर्न छाडेको छ। विमानस्थलका दुईवटा मेसिनले यात्रुका सरसामान राख्ने ह्यान्ड ब्याग र लगेज परीक्षण गर्ने व्यवस्था थियो। तर अत्याधुनिक कम्प्युटराइज्ड प्रविधिको मेसिन बिग्रिएपछि हातले खानतलासी गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ।कुमार लुइटेलले आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा लेखेका छन्।
विमानस्थल भएर यात्रा गर्ने तथा तिनका सामान सुरक्षाकर्मीले हातले खानतलासी गर्न थालेका छन्। यसबाट यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको छ। सुरक्षाकर्मीलाई पनि अतिरक्त समय लिएर सुरक्षा जाँच गर्ने झन्झट भएको छ। मेसिन बिग्रदा सुरक्षा चुनौती थपिनुका साथै यात्रु, सुरक्षाकर्मी र विमानस्थल प्रशासनलाई समेत कठिनाइ भएको विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख सुरेशमान सिंहको भनाइ छ।
‘गत साउन २८ गते आएको बाढीले मेसिन डुबाएपछि कामै नलाग्ने गरी बिग्रिएपछि हातले खानतलासी गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। यात्रुको चाप र लगेजको अधिक संख्याका कारण जाँच गर्न निकै समय लाग्ने गरेको छु, उनले भने। हातले खानतलासी गर्नुपर्ने भएकाले यात्रुले तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै विमानस्थल आउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको उनले बताए । बाढीले विराटनगर विमानस्थल डुबाउँदा दुई सातासम्म उडान अवरुद्ध भएको थियो।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २४, २०७४, ०७:५५:४५